Banyere Anyị - Zhejiang Tiantai Jierong New Material Co., Ltd.
Ịtụkwasị obi na mbụ
Zhejiang Tiantai Jierong New Material Co., Ltd. (nke bụbu Hangzhou Boao Textile Co., Ltd.) bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke na-elekwasị anya na nyocha, mmepe, mmepụta na ire nke ntupu na nzacha. Isi ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị na ọmarịcha ogige Taizhou Tiantai. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị na -ebu ọkọlọtọ SC nri. N'ime ihe karịrị afọ iri nke ihe ọhụrụ na mmepe, ntupu anyị, ihe nzacha akpa tii, ihe na-adịghị akpa bụrịrị onye ndu na mpaghara tii na kọfị China. Ngwaahịa anyị dabara na FDA nke America, ụkpụrụ EU10/2011 na iwu ịdị ọcha nri maka Japan.
Ka ọ dị ugbu a, a na -ere ngwaahịa anyị nke ọma na China ma na -ebuga ya na Europe, America, Japan wdg. N'ịche ohere na ihe ịma aka nke ahịa dị ugbu a, Jierong na-ewere nkà ihe ọmụma azụmaahịa nke "ịdị mma mbụ, aha mbụ, onye ahịa mbụ", yana imepụta arụmọrụ dị elu, ike ọkọnọ siri ike, mmesi obi ike dị mma na ọrụ ịre ahịa zuru oke, wee mepụta ihe pụrụ iche. na akara pụrụ iche -Jierong. Anyị nwere ike bụrụ onye gị na ya ga -atụkwasị obi, nwee olile anya n'ezie imekọ ihe ọnụ ma mepụta ọmarịcha ọnụ!
Ihe ngosi 2021 Xiamen International Tea Industry (spring) Expo (nke a na -akpọ '' 2021 Xiamen (spring) Tea Expo ''), ihe ngosi 2021 Xiamen nke mba ụwa na -apụta (nke a na -akpọ '' 2021 Xiamen na -apụta ihe ngosi tii ''), na 2021 ụwa green tii Procurement Fair ga -enwe na Xiamen International Convention na ngosi Center site May 6 ka 10, na ihe ngosi ebe nke 63000 square mita, E nwere 3000 mba ọkọlọtọ ụlọ ndò. Gụnyere ụdị ihe ngosi tii niile, ndị na -egosi nkwakọ ngwaahịa tii, ndị na -egosi ihe ngosi tii, ndị na -egosipụta akpa tii, wdg.
N'oge a, akụ na ụba n'ụlọ na mba ofesi na -agbake n'oge opupu ihe ubi a, jiri nwayọọ nwayọọ na -etolite usoro mmepe ọhụrụ yana mgbasa ụlọ dị ka isi ahụ na mgbasa mgbasa ozi ụlọ na nke mba abụọ na -akwalite ibe ha, yana oriri metụtara ụlọ ọrụ tii amụbawokwa ngwa ngwa okpukpu abụọ. Ihe ngosi 2021 Xiamen International Tea Industry (spring) ga -eji ohere a dị mma nye egwuregwu zuru oke maka uru ahịa yana ikike chọrọ ụlọ, nke ga -akwalite nkwalite ahụike dị mma nke ịzụ ahịa tii ma gbanye ntụkwasị obi na ike siri ike na mgbake akụ na ụba. ụlọ ọrụ tii.